फागुन १६ बाट दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय लोकसांस्कृतिक मेला
काठमाडौं । दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय लोकसांस्कृतिक मेला यहि फागुन १६ देखि २५ गतेसम्म नेपालका विभिन्न शहरमा आयोजना हुने भएको छ । आयोजक एभरेष्ट नेपाल कल्चरल गु्रपले काठमाडौमा एक कार्यक्रमका बीच ‘पर्यटक कलाकारको स्वागत सत्कार, नेपाली लोकसंस्कृतिको आधार’ भन्ने नारासहित मेला आयोजना हुन लागेको जानकारी दिँदै मेलाको तयारी समेत सकिएको जानकारी गराएको हो । विस्तृतमा
कुन अभिनेताको घरको मुल्य कति ?
सौखिन बलिउड अभिनेताहरु जोसँग प्राइभेट जेट
विवाहको तयारी गरिरहेकी प्रियंका कार्कीबारे रोचक कुराहरु
किशोर कुमारको त्यो अन्तिम गीत मिथुनका लागि विशेष बन्यो
बलिउडका को कलाकारको कति छ हाइट ?
जब रेखालाई सासुले चप्पलले हानिन्
सुन्दर आखाँका कारण झनै सुन्दर देखिएका बलिउड अभिनेत्रीहरु
अभिनेता सलिनमान बनियाँ यतिखेर तनावमा छन् । तनावमा पर्नुको कारण हो, उनी अभिनित फिल्म ‘यात्रा’ र अनमोल केसी अभिनति फिल्म ‘ए मेरो हजुर–३’को रिलिज मिति एउटै हुनु ।
शाहरुख खानबारे यी कुराहरु तपाईलाई थाहा नहुनसक्छ
बलिउडका चर्चित र धनी अभिनेता हुन् शाहरुख खान । उनले संघर्ष गर्दा यति धेरै सफलता पाउने कल्पना समेत गरेका थिएनन् । तर, उनको कला र भाग्यले आज उनलाई धन दौलत र स्टारडम सबै दिलाएको छ ।
कुन सेलिब्रेटीले बलिउडमा पाईला राखेको कति वर्ष भयो ?
बलिउड । बलिउडमा आज पनि केही यस्ता चर्चित अभिनेताहरु रहेका छन् जसको स्टारडम आज पनि उत्तिकै मजबुत रहेको छ । उमेरले ५० को सेरोफेरोमा रहेका यी बलिउड कलाकारहरुको आज पनि करोडौँ फ्यानहरु रहेका छन् ।
जब ऐश्वर्या रायबारे यस्तो रहस्य बाहिर आयो
एजेन्सी । बलिउडकी सुन्दर अभिनेत्री हुन् ऐश्वर्या राय । उनले बलिउडमा आफुलाई टिकाइराख्न धेरै नै संघर्ष गर्नु परेको थियो । तर, संघर्षभन्दा पनि उनी लव अफेयरका कारण भने निकै चर्चामा आइन् । उनको नाम सलमान खानसँग आज पनि उत्तिकै जोडिने गरिन्छ ।
बेलायतका बिभिन्न स्थानमा ‘मिरा सांगीतिक साँझ’ हुँदै
काठमाडौँ । ‘मिलन च्यारीटी फाउण्डेसन’ले बेलायतको बिभिन्नस्थानमा ‘मिरा सांगीतिक साँझ’ आयोजना गर्ने भएको छ । सुनसरीको शहिद स्मृती आवासीय विद्यालयको सहयोगको लागी गायीका मिलन नेवार र गायक राजन राज शिवाकोटीको संयुक्त साँझ बेलायतको विभिन्न स्थानमा आयोजना गरीने भएको हो ।
खुद्रामै दंग सारा
सारा सिरपालीलाई अनमोल केसीसँगको अफेयरले पनि बचाउन सकेन । पछिल्लो रिलिज ‘सूश्री सम्पति’को बेला चलेको अफेयरले फिल्मलाई मात्र होइन, सारालाई पनि फाइदा पुग्ने अनुमान थियो, तर सोचे जस्तो भएन ।
यी गल्तीका कारण सधैँ विवादमा रहिन् माधुरी दीक्षित
'बाठी कटरिना, सलमान खान करिअर जोगाउने हतियार ?'
बलिउडमा कुनै समय सलमान खान र कटरिनाको अफेयरको ठुलै किस्साहरु चल्ने गर्थे । तर, रनवीरको बलिउडमा आगमनसँगै सलमान खान र कटरिनाको सम्बन्ध टिक्न सकेन ।